Ikhaya lokuhlala elinendawo yokubuka izintaba e-Ciwidey, Bdg - I-Airbnb
Ikhaya lokuhlala elinendawo yokubuka izintaba e-Ciwidey, Bdg
Kecamatan Pasirjambu, Jawa Barat, i-Indonesia
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Dessy
U-Dessy Ungumbungazi ovelele
I-Villa Deba isemzaneni onomoya opholile.
I-villa yethu inamakamelo okulala angu-5 anamagumbi okugezela angu-3, igumbi lokuphumula, nekhishi elinomthamo ophezulu wabantu abangu-15 (abantu abadala/ izingane)
Wonke amakamelo namasevisi ahlanzisiswa kahle futhi abulalelwe amagciwane ngaphambi kokuba izivakashi zingene.
Jabulela ukuhlala komndeni wakho lapha. Khathazeka mahhala!
I-Villa Deba Tenjolaya isemzaneni. Ngakho-ke phakathi nokuhlala kwakho, uzozwa isimo sasemaphandleni esivame ukutholakala e-West Java. Umoya lapho upholile impela ngezinga lokushisa le-anaverage lika-17 - 29 degrees centigrade.
1 ikamelo lokulala phansi elinomshini ophephetha umoya oshisayo nobandayo, i-TV enendlu yokugezela enendawo yokugezela
Ikamelo lokulala eliyi-1 elihamba phambili eline-AC, i-TV, negumbi lokugezela
eliseduze Amakamelo okulala angu-3 phezulu anomshini wokuqandisa nokushisisa umoya, i-TV, negumbi lokugezela elihlanganyelwayo
Wonke amagumbi okugezela ane-heater yamanzi
Imibhede engu-4 eyengeziwe (isivele ifakwe enanini)
Amasevisi: amathawula okugeza angu-10, amathawula echibi angu-2, ibhulashi lokuxubha kanye nokugeza umzimba
i-TV cabel egumbini lokuphumula
I-Netflix ekamelweni lokulala elikhulu
Ikhishi elinezinto zikagesi eziphelele (okuhlanganisa ilayisi lokupheka, i-microwave, ne-toaster)
Amathuluzi e-BBQ + amalahle
Amagaloni amabili e-Aqua ngosuku
Amabhodlela angu-10 e-aqua nokudla okulula ngokufika ngakunye
Indawo yokubhukuda enamanzi aqhwakele enobunzulu bamamitha angu-1 - 1.4
Indawo yokupaka yezimoto ezingu-3
Indlu yonke iyimfihlo yesivakashi.
Le villa iseduze nezindawo ezithandwa izivakashi (i-Kawah Putih, i-Ranca Upas, i-Curug Tilu, i-Situ Patenggang). Ukusuka ku-villa, ungaya endaweni yokuzijabulisa eseduze ngebanga elingaba yimizuzu engu-30 uhamba ngemoto ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zethrafikhi.
Asinikezi izikhungo ze-karaoke ngenxa yomsindo wezimo ezingavumelekile ezungeze i-villa. Kodwa uma ufuna ukucula ngesiginci, wamukelekile. Siphinde sihlinzeke ngokupheka nokukhempa nge-oda ngezindleko ezengeziwe.
I-villa yethu isemzaneni onomoya opholile. Inamakamelo okulala angu-5 anamagumbi okugezela angu-3, igumbi lokuphumula, nekhishi. Kukhona indawo yokupaka izimoto ezingaba ngu-4, indawo yokudlala yezingane, nendawo yokubhukuda enamanzi abandayo. Indlu yonke iyimfihlo yezivakashi.
I-villa iseduze nezindawo zokuvakasha (i-Kawah Putih, i-Ranca Upas, i-Situ Patenggang). Jabulela ukuhlala komndeni wakho lapha. Ungakhathazeki!
UDessy Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Kecamatan Pasirjambu namaphethelo